Sweden oo cabsi ka qabta argagixiso kaga timaada Suuriya | Somaliska
Hay’ada amaanka Sweden (Säpo) ayaa soo bandhigtay warbixin ku saabsan shaqsiyaad ka tagay wadanka Sweden oo u safray dalka Suuriya si ay uga qeyb qaataan dagaalada sokeeye ee ka socda wadankaasi.
Säpo ayaa walwal ka muujisay tirada dhalinyarada Sweden ka tagtay ee ku biirtay jamhadaha ka dalaamaya Suuriya, qaasatan Hay’ada ayaa soo bandhigtay in 75 qof ay Sweden ka tageen oo ay ku biireen waxay ugu yeereen ururo xag jir ah oo ka jira Suuriya.
Walwalka Sweden ayaa ah in raggaas markii ay Sweden ku soo laabtaan ay fuliyaan falal argagixiso. Dowlada Sweden ayaa aasaastay gudi si gooni ah u baara dadka suuriya u safray iyagoo kaashanya Hay’adaha caalamiga ah ee dambi baarista.
Dhalinyarada Suuriya u aaday dagaalada ayaa waxaa ku jira Soomaali, qaarkood ku geeriyooday dagaalada qaar kalena ay wali ku jiraan. Sababaha ka dambeeya in ay ku biiraan dagaalada Suuriya ayay ku sheegeen Jihaad ka dhan ah dowlada Bashaar Al-asad.